“ပြည်သူတွေ စဉ်းစားဖို့” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » “ပြည်သူတွေ စဉ်းစားဖို့”
Posted by ဆင်ဖြူရှင် on Apr 19, 2013 in Politics, Issues | 29 comments
ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့ဟာ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ၆၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်
ဒါနဲ့တဆက်တည်း မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ခုကိုလဲ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ
ရှေးမြန်မာဘုရင်တွေအဆက်ဆက်က သက္ကရာဇ်တွေဖြိုခဲ့ကြလို့ ၁၃၇၅ခုသာရှိနေသေးတာပါ
အမှန်က နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀နီးနီးရှိပါပြီ။ ခေတ်တွေကလည်းအဆက်ဆက်၊ ပုဂံ၊ ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ တောင်ငူ၊ ညောင်ရမ်း ၊ ကုန်းဘောင်၊ ကိုလိုနီ၊ လွတ်လပ်ပြီးခေတ်၊ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ၊ မဆလ၊ စစ်အစိုးရ၊ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ စသည်ဖြင့်ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီခေတ်တွေထဲမှာဘဲ ပြည်ထောင်တွေရဲ့အစဖြစ်တဲ့ ပျူ၊ သရေခေတ္တရာ။ အကူးအပြောင်းစပ်ကြားကာလက မြင်စိုင်း၊ ဂျပန့်ခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးကြို၊ အိမ်စောင့်အစိုးရ။ ခေတ်ပြိုင်တွေဖြစ်တဲ့ ဟံသာဝတီ ၊မြောက်ဦး၊ စစ်ကိုင်း အစရှိတဲ့ခေတ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီထဲမှာမှ မြန်မာနိုင်ငံကြီး စည်းလုံးပြီးချမ်းသာကြီးပွါးသိက္ခါရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကအလွန်တရာနည်းလှပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းအရတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပုဂံခေတ်က နှစ်ပေါင်း ၇၀ ခန့်၊ တောင်ငူခေတ်က နှစ်ပေါင်း ၃၀ခန့်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်က ၆၀ခန့်၊ လွတ်လပ်ရေးကြိုခေတ်က ၃နှစ် ၊ ကြိုကြားကြိုကြားကာလတွေပါထည့်ပေါင်းရင်တောင် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀မပြည့်ပါဘူး။
နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀နီးပါးမှာ ဆယ်ပုံတပုံ လောက်ဘဲစည်းလုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာတွေစည်းလုံးပြီဆိုရေပက်မဝင် စည်းလုံးတာမို့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ ဖိန့်ဖိန့်တုံအောင် ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်းဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံစည်းလုံးပြီးအင်အားကြီးမှာကိုမလိုလားကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့်တော့ ထိုင်း နဲ့ စင်ကာပူပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနိုင်ငံတွေ ကျွန်တော်တို့ထက်သာနေတာကို မလိုလားပါဘူး။
ထိုင်းကတော့သမိုင်းကြောင်းအရ မြန်မာတွေအင်အားရှိတိုင်းသူတို့ အကျိုးစီးပွါးတွေပျက်စီးလို့ မြန်မာတွေစည်းလုံးမှာကိုအလွန်ကြောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကို ထိုင်းနယ်စပ်မှာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်ပေးထားသလို တဖက်ကလည်း ထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတာပါ။ မြန်မာပြည်ကပြည်ပြေးတွေကို ဒုက္ခသည်လို့ဗန်းပြပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုယူပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူမှန်သမျှ နဲ့ အတိုက်အခံကိုထောက်ခံတဲ့ အသံလွှင့်ဌာနတွေကိုလည်း အခြေစိုက်ခွင့်ပြုထားတာပါ။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေ ကိုမြန်မာဘက်ကပိတ်လိုက်ရင် ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေထိခိုက်တာအမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အဓိက ကုန်သွယ်ဘက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမဆိုသလောက်နစ်နာတာဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွါးကိုမထိခိုက်ပါဘူး။ အမှန်တကယ်ထိခိုက်မှာက မြန်မာနိုင်ငံစီးပွါးရေးပွင့်လင်းသွားခဲ့ရင်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေက စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက် ထိုင်း၊တရုတ်နဲ့ စင်ကာပူတို့ဟာအလွန်အလုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းတွေကိုပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့အတွက်ဈေးချိုချိုသာသာနဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကို သူတို့နိုင်ငံမှာဘဲ ဈေးချိုသာတဲ့ မြန်မာလုပ်သားတွေနဲ့ဘဲ ကုန်ချောတွေထုတ်ပြီး ကမ္ဘာတဝန်းကိုရောင်းချပါတယ်။ ဒါဟ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်တာဖြစ်ပြီး အမြတ်ငွေဒေါ်လာဘီလျံများစွာရရှိစေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစင်ကာပူနဲ့ ထိုင်းဟာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ အသားတင်ထုတ်ကုန်အများဆုံးရရှိနေတာပါ။
တကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပွင့်လင်းသွားခဲ့ရင် ပြိုင်ဘက်တွေတိုးလာလို့အရင်လို ဈေးချိုချိုနဲ့ မရတော့ပါဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် အကြီးမားဆုံးထိုးနှက်ချက်က မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေပြည်တော်ပြန်တာပါဘဲ။အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းစာရင်းတွေအရ ထိုင်းမှာ မြန်မာလုပ်သားပေါင်း၂သန်းရှိပါတယ်။ ထိုင်းလုပ်သားတွေဟာ မြန်မာလုပ်သားတွေကိုပေးသလောက်နဲ့ ဒီစက်ရုံတွေမှာမလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒီအတွက် လုပ်အားခတွေတိုးမြှင့်လိုက်ရင် ကုန်စည်တွေကအရင်ကဈေးနဲ့ရောင်းရင်အရှုံးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဈေးကိုတင်ရောင်းရပါတယ်။ ဒီလိုဆို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘို့အားနည်းသွားပါပြီ။ ဒါဟာတိုင်းပြည်တခုရဲ့စီးပွါးရေးကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲကတခုပါ။
စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေထဲကမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂျပန်ပြီးရင်အကူအညီအပေးဆုံးပါ။ ဂျပန်တောင်မှစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ကန့်ကွက်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကြီးကြီးမားမားမလုပ်ပါဘူး။ စင်ကာပူကတော့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာအရင်းအနှီးတွေလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါတွေဟာဘာကြောင့်ပါဘဲ။
စင်ကာပူဟာတကယ်တော့ကျွန်းနိုင်ငံလေးတခုပါ။ လူဦးရေကလည်း ရန်ကုန်မြို့လောက်တောင် သိပ်သည်းမှုမရှိပါဘူး။ စိုက်ပျိုးဘို့၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်ဘို့နေနေသာသာ လူတွေနေဘို့တောင်နေရာကမလောက်ချင်ပါဘူး။ ရေတောင်ဝယ်သောက်ရပါတယ်။ ဒီလိုနိုင်ငံရဲ့စီးပွါးရေးကတော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကြားမှာ အကျိုးဆောင်လုပ်ပေးတာပါ။ အရပ်အခေါ်အဝေါ်အရ ပွဲစားပေါ့။ ဒီအတွက်သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေရှိစရာမလိုပါဘူး။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နဲ့ နိုင်ငံကမဟာဗျူဟာကျဘို့သာလိုပါတယ်။ “ငါပြောသလိုသာလိုက်လုပ်ကြ ဘာမှဆင်ခြေမပေးနဲ့” ဆိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း လီကွမ်ယူ ရဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကစင်ကာပူဟာ ကံကောင်းစွာဘဲ အာရှပစိဖိတ်ရဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံး၊ အသွားအလာအများဆုံးရေလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ မလက္ကာရေလက်ကြားမှာတည်ရှိနေပြန်ပါတယ်။
ဒီအတွက် ဥရောပကကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အာဖရိကကကုန်စည်တွေဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသကို ပို့ဆောင်ရင် စူးအက်တူးမြောင်းကိုဖြတ်ပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကျော်ကာ မလက္ကာရေလက်ကြားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကမ္ဘာ့မရှိမဖြစ်ကုန်စည်ဖြစ်တဲ့
အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ရေနံစိမ်းတွေဟာ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များတဲ့တရုတ်အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ အရှေ့အာရှကို မလက္ကာရေလက်ကြားကဘဲဖြတ်ကျော်ပြီးရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါ့အပြင် အာရှပစိဖိတ်ဒေသက ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး အသုံးဝင်တဲ့ကုန်စည်တွေကို ဥရောပ၊ အာဖရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုပို့ဆောင်လျှင်လည်း ဒီလမ်းကြောင်းပါဘဲ။ ဒါဟာ မလက္ကာရေလက်ကြားတည့်တည့်မှာ ရှိတဲ့စင်ကာပူအတွက်တော့ ဘုရားပေးတဲ့အခွင့်အရေးပါ။ ဒါကိုအောင်မြင်အောင် အသုံးချနိုင်တဲ့အတွက် စင်ကာပူဟာ နိုင်ငံငယ်သလောက်ကမ္ဘာမှာထိပ်တန်းရောက်နေတာပါ။ ဒါ့အပြင် စင်ကာပူဟာဘဏ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ရာမှာလည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပိတ်ဆို့မှုတွေမရှိတော့ရင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့ဝင်လာမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ်းရိုးတန်းမိုင်ပေါင်း ၁၂၀၀ကျော်ရှိတဲ့အပြင် အာရှပစိဖိတ်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကုန်းလမ်းကတဆင့်ပို့ဆောင်နိုင်မှာပါ။ ကျောက်ဖြူ၊ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွေပြီးသွားရင် ဒါတွေဟာတကယ်ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီလိုဆိုရင် အာရှပစိဖိတ်နဲ့ အခြားတိုက်ကြီးတွေ ကုန်သွယ်မှုဟာ မလက္ကာရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီအတွက်
အချိန်(၃ရက်နီးပါး) နဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို သက်သာစေပါတယ်။ စီးပွါးရေးသမားတွေအတွက်က
အချိန်ဟာငွေပါဘဲ။ ရက်တိုတိုနဲ့ပို့နိုင်လေ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာလေ၊ ငွေမြန်မြန်ပေါ်လေပါဘဲ။
မလက္ကာရေလက်ကြားမှဖြတ်သန်းရင် ပင်လယ်ဓားပြရန်ကိုလည်းကြောက်ရပါသေးတယ်။ မလေး၊စင်ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှားရေတပ်တွေကင်းလှည့်နေပေမဲ့ လုံးဝစိတ်ချရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တခုကကမ္ဘာမှာစွမ်းအင်နဲ့ ဝယ်လိုအားအများဆုံးဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံပါ။ တရုတ်နိုင်ငံဟာသူ့ကို တင်သွင်းတဲ့ရေနံစိမ်းတွေကို
အမေရိကန် နဲ့မဟာမိတ်တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မလက္ကာရေလက်ကြားက ဖြတ်သန်းရတာကိုမလိုလားပါဘူး။ဒီအတွက်တရုတ်နိုင်ငံဟာ သမုဒ္ဒရာ ၂စင်းပေါ်လစီချပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုပါအသုံးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဒါ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းဟာ အသင့်တော်ဆုံးပါ။ ဒီကမှတဆင့်ပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ ပြည်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်သွင်းဖို့စီမံထားပါတယ်။
ထိုင်းကလည်း ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို အလျှင်အမြန်အကောင်ထည်ဖော်နေပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းတွေဟာ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ တရုတ်နဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကိုအကျိုးထူးရစေပေမဲ့ စင်ကာပူကိုတော့ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်စင်ကာပူကလည်း မြန်မာနိုင်ငံပွင့်လင်းလာမှာကိုမလိုလားပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဘဲ စစ်အစိုးရသက်ရှည်စေအောင်ထိပ်ဆုံးကကူညီပေးခဲ့တာပါ။
မြန်မာရဲ့အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုလည်း အနည်းငယ်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ အိန္ဒိယ ကတော့မြန်မာနဲ့နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့အပြင် တရုတ်နဲ့လည်းဒေသတွင်းမှာ ချိန်ခွင်လျှာညှိနေရတာမို့ အမြတ်ထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းပါတယ်။ လာအိုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံလိုဘဲ ပြည်တွင်းရေးအရှုပ်တွေရှင်းနေရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ ကတော့ ပြသနာရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုက နိုင်ငံအရွယ်အစားနဲ့မလိုက်အောင်ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်များပြားလှတဲ့လူဦးရေအတွက် လိုအပ်တဲ့သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ ရယူသုံးစွဲရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အငြင်းပွါးစရာတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နယ်စပ်မှာနေထိုင်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာလို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူမျိုးစုအရေးကလည်း ခုထိဖြေရှင်းလို့မပြီးသေးပါဘူး။
အိမ်နီးချင်းမဟုတ်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား၁သန်းလောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံကတော့ မလေးရှားပါ။ မလေးရှားဟာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့အပြင်မူစ္စလင်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ပါတယ်။သူကလည်း လူနည်းစုဘာသာရေးပြသနာတွေကို ထိုင်းနဲ့အငြင်းပွါးနေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာပြသနာမှ မရှိပါဘူး။
ဒါဆိုအထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့ထိုင်းနဲ့ စင်ကာပူသာ သတိထားရမှာဖြစ်သလို တရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။
ဒါတွေကိုရှင်းပြနေရတဲ့အကြောင်းအရင်းက မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မြောက်များလှစွာသောပြသနာတွေကိုပြောချင်လို့ပါ။ တိုင်းပြည်ကရှေ့တိုးမယ်လုပ်လိုက်ရင်နောက်ပိုင်းကပြသနာတွေဘဲပြန်ပြန်ရှင်းနေရတာဘာကြောင့်ပါလဲ။ဒီပြသနာတွေဟာအရင်ကခေတ်စနစ်နဲ့ ဥပဒေအားနည်းမှုကြောင့်လည်း ဖြစ်သလို နိုင်ငံတကာဗဟုသုတနည်းတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉဏ်နဲ့လည်း တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။ မြန်မာအများစုဟာ ဆွဲဆောင်ရလွယ်ကူသလို ပြောသမျကိုအကြွင်းမဲ့ယုံလိုက်ကြတာများပါတယ်။ ဒါဟာနိုင်ငံတကာက အဖျက်သမားတွေအကြိုက်ပါဘဲ။
မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအဖွဲ့တွေဟာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ခုထက်များပါတယ်။ ဒါဟာအချုပ်အချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတခုအနေနှင့် စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေပါ။ အင်အားအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံ့တပ်မတော်ရဲ့ ၅ပုံ ၁ပုံလောက်ရှိပါတယ်။ အခြေစိုက်စခန်းတွေအခိုင်အမာရှိသလို ပြောက်ကြားစနစ်မဟုတ်ဘဲ တရားဝင်တပ်မတော်တခုလို ယူနီဖောင်းနဲ့လက်နက်အပြည့်အစုံပါ။အချို့အဖွဲ့တွေ၌ နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်တွေနဲ့ သံချပ်ကာယဉ်တွေအထိရှိပါတယ်။ စစ်သုံးပစ္စည်းဆိုတာအလွန်ဈေးကြီးပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဒါတွေကို တပ်ဆင်နိုင်ဖို့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ မှောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ အဲကရတဲ့ဝင်ငွေတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုထပ်အများကြီးပိုပါတယ်။
ဒီတော့ဒီလက်နက်ကိုင်တွေဟာအလွယ်တကူတော့လက်နက်ကိုစွန့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေကိုအနုနည်းရော၊ အကြမ်းနည်းပါနိုင်ငံတကာနဲ့ပေါင်းပြီးအချိန်အတော်ကြာဖြေရှင်းရဦးမှာပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီပြည်တွင်းစစ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအရှည်ကြာဆုံးဖြစ်ပြီး ရာစုနှစ်ဝက်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပါပြီ။
ခုနောက်တခါရိုဟင်ဂျာလို့သူတို့ဖာသာသက်မှတ်ထားသူတို့အရေးကိုလည်းဖြေရှင်းရဦးမှာပါ။ နောက်ပြီးအတိုက်အခံတွေရဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေ၊ မီဒီယာတွေရဲ့လေပင့်မှုတွေ၊ အစိုးရအတွင်းခြစားမှုတွေ၊
စစ်တပ်မုန်းတီးရေးလုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ အစိုးရနဲ့ပြည်သူနားလည်မှုလွဲမှုတွေ၊ လူထုရဲ့အချိန်တိုအတွင်း ဘာမဆိုဖြစ်ချင်မှုတွေကိုလည်းအစိုးရကရင်ဆိုင်ရဦးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဘာသာရေးအထိကရုံးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးမှုတွေကလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ အစိုးရနဲ့ပြည်သူနားလည်မှုလွဲနေသေးတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ရှေ့တိုးရမည့်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆင်းရဲမွဲတွေမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ စီးပွါးရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စက်မှုထွန်းကားရေး၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးနဲ့ သောက်ရေသုံးရေးရရှိရေးတို့ကိုထိရောက်အောင်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင်သမ္မတက်လုပ်ရင်တောင်အတော့ကိုခေါင်းစားသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေဟာအစိုးရနဲ့ပြည်သူ အတွဲညီညီတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်ပြောမနေဘဲတက်ညီလက်ညီဖြေရှင်းမှအောင်မြင်မှာပါ။ ဒါတောင်ဆယ်စုနှစ်၂ခုလောက်အချိန်ယူရနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အတိုက်အခံဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်းတိုးတက်တာပါ။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်အများစုဟာ ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမယ်၊ စည်းလုံးရမယ်၊ တက်ညီလက်ညီရှိရမယ်ဆိုပြီးတိုက်တွန်းတာနည်းပါတယ်။ မှားနေရင်လည်းပြည်သူကိုထောက်ပြဖို့ဝန်လေးကြပါတယ်။ အစိုးရကိုသာ အလွယ်တကူလက်ညှိုးထိုးပြီးဝေဖန်ပြစ်တင်ကြတာများပါတယ်။ဒါကလည်း ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့သဘောပါ။
နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ဟာ တိုင်းပြည် ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတခုခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ပါ။ ဒါဆိုလူကြိုက်များဖို့လိုပါတယ်။ လူကြိုက်များအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတခုနဲ့တခုမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာ ဉဏ်ရည်နဲ့ဗဟုသုတမတူပါဘူး။ ဒါတွေအပြင် ပညာတတ်မြောက်မှုရာခိုင်နှုန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့၊ ကိုးကွယ်မှု၊ အဓိကစီးပွါးရေး ဒီအချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးလည်းကွဲလွဲသွားကြပါတယ်။ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဟာ အမေရိကနဲ့ဥရောပ ပုံစံလိုလူကြိုက်များအောင်လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စိုက်ပျိုးရေးအဓိကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်လယ်သမားထုနဲ့လက်လုပ်လက်စားကလူဦးရေရဲ့၆၀ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိပါတယ်။ဒီထက်လည်းပိုနိုင်ပါတယ်။ လယ်သမားအများစုဟာ ပညာတတ်တွေမဟုတ်ကြသလို ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ စကားပြောကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ သားကောင်တွေပါဘဲ။
ဒါအပြင် မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကို အကြွင်းမဲ့လိုက်နာတတ်တဲ့သဘောရှိတာမို့ ဘာသာရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးလည်း ကို့ဘက်ပါအောင်စည်းရုံးလို့ရပါသေးတယ်။အစိုးရလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်တာကိုသာ ထောက်ပြတတ်ပြီး အကြံကောင်းဉဏ်ကောင်းမပေးဘဲ မိမိကိုထောက်ခံရေးဦးတည်လုပ်ကြသော အတုအယောင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုသဘောကျလေ့ရှိပါတယ်။ အတိုက်အခံကိုမနှစ်သက်သော်လည်း အစိုးရကိုမုန်းတီးနေတဲ့ပြည်သူတွေဟာ အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုကဟုတ်နိုးနိုးထင်တက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံရေးသမားအများစုဟာ အမာခံပရိသတ်ကိုရလေ့မရှိကြပါဘူး။ သူတို့နောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူအများစုဟာ ထိုပုဂ္ဂိုလ် အခြေအနေမကောင်းရင် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ကြတာပါ။ ဒါဟာပြည်သူတွေကိုအထင်သေးတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ခုခေတ်ခါအရဒီလိုဖြစ်နေတာပါ။
ထိုနိုင်ငံရေးသမားကိုယ်တိုင်လည်း အာဏာမရခင်မှာ မိမိအာဏာရလျှင် ဘာတွေဖြစ်စေရမယ်၊ညာတွေဖြစ်စေရမယ် ဆိုပြီးပြည်သူတွေလိုချင်တောင့်တတဲ့ဟာတွေကို ကတိတွေတွင်တွင်ပေးပြီး လူကြိုက်များအောင်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လည်း အာဏာရလာတဲ့အခါမှာ ပြည်သူတွေကိုပေးခဲ့တဲ့ ကတိတွေရဲ့ သုံးပုံတပုံတောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အကြီးအကဲတွေဟာ အလွန်ရှားပါးကြောင်း ကမ္ဘာ့သမိုင်းနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ မြင်ဘူး၊ကြားဘူး၊ ဖတ်ဘူးကြမှာပါ။
“လူတွေဟာ အတိုက်အခိုက်တွေဘယ်လောက်များများ တောင့်ခံနိုင်တယ်။ အာဏာကိုတော့မခံနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့သီလကို သိချင်ရင် ထိုလူ့ကိုအာဏာပေးလိုက်ပါ” လို့ ကမ္ဘာကျော်အမေရိကန်သမ္မတကြီး လင်ကွန်းကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပြည်သူတယောက်ချင်းစီ၊ မီဒီယာ၊ အစိုးရနဲ့အတိုက်အခံတွေအပါအဝင် လုပ်သင့်မလုပ်သင့်၊ ပြောသင့်မပြောသင့် ကိုသုံးသပ်ပြီးမှ ဖြစ်သင့်တာကိုလုပ်ရဲတဲ့တာဝန်ယူစိတ်ရှိရပါမယ်။
လူတိုင်းဟာမိမိတာဝန်မိမိကျေပွန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူများတွေရဲ့အမှားတွေကိုအပြစ်မပြောဘဲ၊ ထောက်ပြပြီးဘယ်လိုဆိုပိုကောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးသာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြံပေးမှု၊ ပူးပေါင်းမှု၊ တာဝန်ယူမှုတွေရှိရမှာဖြစ်သလို သွေးခွဲတဲ့၊ သွေးထိုးတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရန်တွေကိုလည်း အမျိုးသားရေးသတိနဲ့အမြဲကာကွယ်ချင့်ချိန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
“လူတိုင်းမိမိတာဝန်မိမိကျေပွန်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်စနစ်ဘဲကျင့်သုံးကျင့်သုံး၊ ဘယ်လိုအစိုးရဘယ်တက်တက် မြန်မာနိုင်ငံဟာ စည်းကမ်းမရှိတဲ့၊ ဘယ်သူ့တွေ့တွေ့မျက်နှာချိုသွေးနေရတဲ့ ဖာနိုင်ငံလိုမျိုးဖြစ်နေမှာဘဲ” ဟုမြန်မာ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပြောကြားခဲ့တာကိုတင်ပြရင်း ဒီဆောင်းပါးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ွှအကြောင်းအရာတွေများပြားကျယ်ပြန့်လွန်းလို့ ခြုံငုံပြီး ကွန်မင့်ရေးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး..။
နိုင်ငံတကာ အရေး ၊ အိမ်နီးချင်းနဲ့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးတွေမှာ-
တကယ့်အကြောင်းက အကျိုးစီးပွား ပါ။
ဒါ့ကြောင့် ချည်စရာရှိရင် အကျိုးစီးပွားနဲ့သာ ချည်ရပါမယ်။
ကာစရာရှိရင် အကျိုးစီးပွားနဲ့သာ ကာရပါမယ်။
အကျိုးစီးပွားဆိုတာ ကာလ ဒေသ အကြောင်းတွေအရ ဖြစ်တည်သလို
ပယောဂ လို့ ဆိုရမယ့် လုပ်ယူ ပြီးတော့လဲ ဖြစ်တည်တတ်ပါတယ်။
ဥပမာ အရင်ခေတ်တုန်းက ဖုံးတစ်လုံး သိန်းသုံးဆယ်ကျော်တန်အောင် လုပ်ယူ ထားတယ်။
ဒီတော့ ချီးမြှောက်စရာရှိရင် …… ရော့ နှစ်ဆယ့်ငါးဒေါ်လာတန်ဆင်းကဒ်တစ်ခု… (အဲဒီတုန်းကဆင်းကဒ်တန်ဘိုးက အခုလို ဆင့် ရှစ်ဆယ်တန်မဟုတ်ပါ)
အနံ့ပေးစရာရှိရင် …… ရော့ … ဆင်းကဒ်တစ်ခု….
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဖြစ်လို့ ကြက်တွေသတ်ပြီး လျော်ပေးဘို့လိုရင်… ရော့…. ဆင်းကဒ်တစ်ခု…….
ပေါ်လစီကားခေါ်ရိုက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ကြေးပေးဖို့လိုရင် ရော့… ဆင်းကဒ် တစ်ခု…….
လှေလုပ် တတ်တဲ့ ဇ တော့ရှိသား……
ခက်တာက … စက္ကူနဲ့ပဲ ချိုးတတ်တယ်ထင်ရဲ့……
ဖြစ်သင့်တာကို.. ပြောင်းပြန်တွေဖြစ်အောင်… မနာလိုတဲ့(အိမ်နီးချင်း)နိုင်ငံတွေကတွန်းမယ်ထင်မိတယ်..
အဲဒီအပေါ်က၃ခု.. စီမံကိန်းချောမွေ့အောင်မြင်ရင်..ပွင့်လင်းမြင်သာဖြစ်ရင်.. မြန်မာ့စီးပွားရေး အရမ်း(အရမ်း) ထောင်တက်လာမယ် ထင်မိတယ်..
ဒီလိုနဲ့.. ချမ်းသာတဲ့ဒဏ်ကို.. မြန်မာတွေခံနိုင်ပါ့မလားတောင် စိုးရိမ်ရမှာ..
တပြိုင်နက်ထဲ.. စင်္ကာပူနဲ့..မလေး..ထိုင်းတို့ စီးပွားရေးလည်း.. တော်တော်ထိခိုက်သွားမယ်.. မြင်မိတယ်..။
ပြည်သူပြည်သားတွေဘက်ကလည်း မျက်စိကြီး နားကြီးကြဖို့ လိုနေပါပြီ။
ခုချိန်မှာ ဒီစာကို ဖတ်ရတာ မျက်စိနားကို ဖွင့်ပေးလိုက်သလို အကျိုးများလွန်းလို့ အနှစ်သာရတွေ ပြည့်စုံလွန်းလို့ စာရေးသူ ဆင်ဖြူရှင်ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Thank you for this post. Two thumbs up..!!
စင်ကာပူပညာရေး၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမော်ဒယ်နှင့် မြန်မာ
စင်ကာပူတိုးတက်ရခြင်းမှာ ပညာရေးက အဓိကအချက်အနေနဲ့ပါခဲ့ပါတယ်။ 1965ခုနှစ်ကစပြီး စင်ကာပူဟာ အနာဂတ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်မယ့် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1945-1965အထိကာလတွေကြား စင်ကာပူဟာ မုန်တိုင်းထန်တဲ့ ကာလတွေကိုဖြတ်ကျော်နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
-မျိုးနွယ်စုတွေမတူညီကြခြင်း၊ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်း၊ Infrastructure တွေရှားပါးအဆင့်မမီခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများပြားနေခြင်းတွေက စင်ကာပူကို စိန်ခေါ်နေခဲ့တယ်။ စင်ကာပူရဲ့ အဓိက စိန်ခေါ်မှုက တရားဝင်အစိုးရတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေပိုများတဲ့ မလေးရှားနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းက ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
1963-1968 မှာ မလေးရှားနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အစီအစဉ်ပျက်သုန်းသွားပြီးနောက်ပိုင်း မှာ စင်ကာပူအနေနဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတော်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဟာသည် အဓိက နိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Entrepot Economy ကနေ Export Based Economy ဖြစ်ဖို့သည် စင်ကာပူရဲ့ စီးပွားရေးဦးတည်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူမှုရေးဦးတည်ချက်ကတော့ လူမျိုးနွယ်စုမတူညီသူတွေကြားထဲ တင်းမာမှုတွေလျော့ကျပြီး ပြေလည်စေရေးဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးဦးတည်ချက်ကတော့ တိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံရေးစံနစ်ကို ကောင်းကောင်းအထောက်အကူပြုမယ့်သူတွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူမှာ သင်င့်္တင့်တဲ့ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့လုပ်သားတွေအမြောက်အမြားလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် ဘာသာစကားတစ်ရပ်လဲ အပူတပြင်းလိုအပ်နေပါပြီ။ ဒါ့ပြင်နိုင်ငံတော်ရေးရာကိစ္စတွေ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ ထက်မြက်တဲ့ အရည်အသွေးရှိသူတွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
“Survival-Driven Education (1965-1978)”
အဲ့ဒီကာလ ပညာရေးပေါ်လစီက တိုင်းပြည်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ ကို အဓိကထား ပေါ်လစီချမှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပညာရေးစံနစ်တစ်ခုထဲကို လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ စီးဆင်းအလုပ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘာသာစကားအတွက် Bilingual Education System လို့ခေါ်တဲ့ မိခင်ဘာသာစကား+အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ပြဌာန်းခဲ့ရပြီး အခြေခံ ပညာရေးအဆောက်အဦးတွေ၊ ကျောင်းတွေကို အလျင်အမြန်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့သလို ဆရာ၊ ဆရာမတွေကိုလဲ အကြီးအကျယ်တိုးမြှင့် အလုပ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။1973 ခုနှစ်မှာ ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အခြေခံလုပ်သားလိုအပ်မှုအတွက် အလုပ်သင်ထရိန်နင်အခွင့်အလမ်းတွေကို တိုးပွားအောင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပညာရေးမှာ အဓိက ဦးစားပေးခဲ့တာကတော့ သိပ္ပံ၊ သင်္ချာနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ဦးစားပေးသင်ကြားစေခဲ့တာပါ။
“Efficiency-Driven Education (1978-1997)”
1987 ပတ်ချာလည်ကစပြီး ပညာရေးလမ်းစဉ်ဟာ တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီ။ ယခင် တိုင်းပြည်ရှင်သန်ရေးအတွက်ကနေ ထိရောက်မှုအဓိက ဖြစ်လာခဲ့ရပါပြီ။ 1980လွန်ကာလများကတည်းက စင်ကာပူဟာ စက်မှုတိုင်းပြည်အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းအသွင်ပြောင်းလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးအရ အလုပ်သမားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ ပညာရေးပေါ်လစီကို အသွင်ပြောင်းလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်မှုအဓိက ပညာရေးစံနစ်က Vocational Trainings တွေကို ပိုမိုပွင့်လန်းစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 1990 ကာလတွေမှာ ပညာရေးစံနစ်ဟာ Knowledge-Based Economy လို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေးစံနစ်ရဲ့ စ်ိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်လာရပါပြီ။ ဒါကြောင့် Efficiency driven Education system ကို မုချပြောင်းလဲမှဖြစ်ပါတော့မယ်။
“Ability Driven Education (1997-Present)
ဒီလိုနဲ့ Thinking Schools, Learning Nations ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိက ရည်မှန်းချက်က တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို လက်ရှိရာစုနှစ်မှာ ဦးဆောင်နေနိုင်အောင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခြေခံအရည်အသွေးတွေကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာအောင် သင်ယူခွင့်တွေအမြောက်အများ ပေးအပ်ထားပြီး ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် လက်ရှိထွန်းကားလာတဲ့ အိုင်တီနည်းပညာကို အသုံးချအမြတ်ထုတ်ပြီး ကျောင်းသားတွေ ပညာသင်ကြားနိုင်အောင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆရာတွေကို ထရိန်နင်ပိုမိုပေးခဲ့ပါတယ်။ Life-Long training ဆိုတာ စင်ကာပူမှာ စာသင်ကြားပေးမယ့် ဆရာ၊ဆရာမများအတွက် အခြေခံနားလည်ထားရမယ့် ဥပဒေသ စည်းမျဉ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်လေးဆယ်စင်ကာပူပညာရေးစီမံကိန်းမှာ ပြဆိုထားတာကတော့ တစ်သက်တာဆည်းပူးခြင်း (Life Long Learning) ကို ဖြစ်စေနိုင်ဖို့ ဖြည့်ဆည်းပေးရေးသည် နိုင်ငံတော်အဆင့် စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပညာရေးအောင်မြင်ရခြင်းသည် စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်ခိုင်မာတဲ့ ဦးဆောင်မှုပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပြီး အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့ လက်ရှိကမ္ဘာစီးပွားရေးရေစီးတွေကို ချက်ခြင်းဆိုသလို တုန့်ပြန်နိုင်အောင် လိုက်လျောညီထွေရှိတဲ့မျိုးဆက်တွေကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူတိုးတက်ရခြင်းမှာ ပညာရေးအပေါ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ ဆိုတာ အငြင်းပွားစရာမရှိပါဘူး။ စင်ကာပူဖြတ်သန်းသွားရတဲ့ ခရီးစဉ်ကို ကြည့်ရင်
(၂) တိုင်းပြည် ထူထောင်ရေးကာလ
(၃) အရှိရလာသော စီးပွားရေးကို ခေတ်နှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေ အုပ်ချုပ်သွားသည့်ကာလ လို့
တည်ဆောက်ရေးကာလမှာ ပညာမဲ့တွေကို ပညာရိုက်သင်ပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကျစေပြီး ဂျီဒီပီတက်စေဖို့ပါ။ တည်ဆောက်ရေးကာလကိုဖြတ်ကျောအပြီး အနည်ထိုင်စကာလမှာ စက်မှုနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကို တစ်ဆစ်ချိုးလုပ်ခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ။ တိုင်းပြည်အနေနဲ့ စီးပွားရေးအောင်အောင်မြင်မြင် ဖွံ့ဖြိုးသွားအပြီးမှာတော့ လက်ရှိသွားနေတဲ့ ရေစီးကို လိုသလို ပဲ့ကိုင်နိုင်မယ့် မျိုးဆက်တွေအဆင်သင့်ရှိနေအောင် ကြိုးပမ်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) နိုင်ငံရေးအဖြေရှာမှု (အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့မှု)
တွေကို စင်ကာပူလိုပဲ ဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ တစ်ခုရှိတာက Knowledge Worker မဟုတ်ပေမယ့် Vocational Training ပေးရင် ချက်ခြင်းဆိုသလို အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ဘွဲ့ရလူတန်းစားတစ်ရပ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ စင်ကာပူထက် ဖွံ့ဖြိုးရေးခရီးဟ အချိန်တိုတို ရောက်နို်င်တယ်လို့ပြဆိုနေတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး ထိုင်းနဲ့ မလေးမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူငယ်ခြောက်သန်းလောက်ကို ထည့်တွက်ရင် Young and fresh Large scale labour ကိုမျှော်လင့်လို့ရနိုင်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးဟာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှ ဖြစ်နိုင်မှာမို့ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပြီး ဆုံမှတ်တစ်ခုကို ရှာနိုင်ဖို့သည် ဒီအစိုးရသက်တမ်းအတွင်း အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Credit to >>> Myo Set
Two thumbs up..!! + one more for KZ .
တော်တော်လေးကို စံနစ်တကျ ပြင်ဆင်ပြီး ရေးထားတဲ့ ၊
ဆောင်းပါးကောင်း တစ်ပုဒ်ပါပဲ ။
ထောက်ခံ အားပေးလိုက်ပါတယ် ခမျ ။
တစ်ခုလေးပဲ ပြောချင်တာက ၊
စင်္ကာပူ နိုင်ငံ တိုးတက်သွားတာရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း က ၊
လီကွမ်ယူ အပါအဝင် အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ကိုရခဲ့လို့ပါ ။
စင်္ကာပူ နိုင်ငံ မလက္ကာရေလက်ကြား ပေါ်မှာ ရှိနေလို့ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး ။
အသွားအလာများတဲ့ မလက္ကာ ရေလက်ကြား ဟာ အရှည်ကြီးပါ ။
အဲဒီ ရေလက်ကြား တစ်လျှောက် မှာ မလေး အင်ဒို နိုင်ငံတွေလဲ ရှိကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ နိုင်ငံတွေက ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို ၊
စင်္ကာပူ နိုင်ငံ လိုမျိုး အမြန် ဖမ်းမယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
စင်္ကာပူ ခေါင်းဆောင် လီကွမ်ယူ ကတော့ အစောဆုံး ဖမ်းဆုတ်နိုင်ခဲ့လို့ ၊
စင်္ကာပူ ဟာ ဒေသတွင်းမှာ အစောဆုံး ချမ်းသာလာခဲ့တာပါ ။
အခုတော့ မလေး အင်ဒို နိုင်ငံတွေလည်း မျက်စိပွင့်လာပါပြီ ။
သူတို့လည်း ၊ မလက္ကာ ရေလက်ကြား ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ အခွင့်အလမ်းကို ဆွဲယူပါပြီ ။
Tanjung Pelepas တို့ ၊ Port Klang တို့လို ဆိပ်ကမ်းကြီးတွေ ဆောက်ပြီး ၊
Singapore ဆိပ်ကမ်း ရဲ့ ဈေးကွက် အတော်များများ ( အတော်များများ ) ကို လုယူလိုက်ပါပြီ ။
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး Container Line နံပါတ် ၁ နှင့် ၂ ဖြစ်တဲ့ ၊
Maersk Sealand နှင့် Evergreen က သင်္ဘောတွေဟာ ၊
အခု Singapore ဆိပ်ကမ်း ကို မဝင်တော့ပါဘူး ။
Tanjung Pelepas မှာပဲ ကုန်တင် ကုန်ချ လုပ်ပါတော့တယ် ။
Singapore ဆိပ်ကမ်း ဟာ လက်ရှိမှာ အသက်ငင်နေပါပြီ ။
Singapore ရဲ့ သင်္ဘောကျင်း လုပ်ငန်းလဲ တရုတ်ကို မပြိုင်နိုင်တော့ပါဘူး ။
Singapore ရဲ့ ရေနံချက်လုပ်ငန်းလဲ အခြေအနေ စ ယိမ်းယိုင် လာပါပြီ ။
ဒါပေမယ့် Singapore ခေါင်းဆောင်တွေက အမျှော်အမြင်ကြီး ကြိုမြင် ပါတယ် ။
Singapore ဟာ အရှေ့တောင် အာရှ နှင့် အရှေ့ အာရှ ရဲ့ ၊
ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေးရဲ့ အချက်အချာ hub အဖြစ်ကို လက်လွှတ်ရတော့မယ် ဆိုပေမယ့် ၊
ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးရဲ့ အချက်အချာ hub အဖြစ် ဆက်ရှိနေသေးတာကို အသုံးချပြီး ၊
သူ့နိုင်ငံကို အခု လောင်းကစား နှင့် ဖျော်ဖြေရေး မြို့တော် ဖြစ်အောင် အသွင်ပြောင်းနေပါပြီ ။
အမျှော်အမြင် နည်းတာကတော့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလို့ပဲ ထင်ပါတယ် ။
အခု ထားဝယ်က ကျောက်မီးသွေး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံကို ဝိုင်း ကန့်ကွက်နေကြတယ် ။
ဓါတ်အားပေး စက်ရုံသာ မရှိရင် ၊ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ကို ဘယ်လို လည်ပါတ်မလဲ ။
အခုက ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း က ၊ ပျက်ဖို့ တော်တော် အသံထွက်နေတယ် ။
အဘ ကတော့ ၊ သူကြီး နှင့် နဲနဲ ကွာပါတယ် ။
၁ ။ ထားဝယ် ရေနက် ဆိပ်ကမ်း ၊
၂ ။ ကျောက်ဖြူ ရေနက် ဆိပ်ကမ်း ၊
၃ ။ ကျောက်ဖြူ – ချိူင်းနား ရေနံ ဂက်စ် ပိုက်လိုင်း ၊
စတာတွေကို ထောက်ခံပါတယ် ။
၄ ။ မြစ်ဆုံ ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း ကိုတော့ နဲနဲ အင်တင်တင် ဖြစ်ပါတယ် ။
တစ်ခြား နေရာတွေမှာ လုပ်စမ်းပါ ။ မြစ်ဆုံ ဆိုတော့ ခံစားချက် နဲနဲ ရှိနေလို့ပါ ။
နောက်ပြီးတော့ ၊ အဘ က အကောင်းဘက်ကနေလည်း မြင်တတ်သူပါ ။
ဟို လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကြီး သူရရွှေမန်း လိုမျိုး တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ကျဆင်းနေပါပြီတို့ ၊
ဟို ဝန်ကြီး တစ်ဦးလို တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုမယ့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုတွေ တစ်ခုမှ မဝင်လာပါဘူး တို့ ၊
အဲလိုမျိုး အဆိုးဖက်ကနေချည်းပဲ မြင်နေတတ်သူ တစ်ဦး မဟုတ်ပါဘူး ။
အဲဒီ ၊ စီမံကိန်း ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၄ အကုန်လုံးပျက် သွားအုံးတော့လဲ ၊ ဘာဖြစ်သေးတတုန်း ။
အခုလိုမျိုး ၊ လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေး အဓိကရုံးတွေ အုန်းအုန်း ထနေတော့ကော ၊ ဘာဖြစ်သေးတတုန်း ။
အဘ တို့က ၊ နေတတ်သလားမမေးနှင့် ၊ အနေသာကြီး ၊ အဝေးကြီး ။
ဟီ ဟိ ၊ မြန်မာပြည်က သာမီးလေးတွေ ဈေးပေါတာပေါ့ ။ ကောင်းထှာ ။
တစ်တိုင်းပြည်လုံး နောက် နှစ် သုံး လေးဆယ် ဆက်ဆင်းရဲအုံးမှာဆိုတော့ ၊
အဘ အိမ်မှာ ၊ အခုလိုပဲ အိမ်ဖေါ် ၂ / ၃ ယောက် ထားနိုင်တာပေါ့ ။
ကောင်းထှာ ။ သြဇီမှာဆိုရင် အဲလို အိမ်ဖေါ် ၂ / ၃ ယောက် ထားနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ။
ပြောပါရောလား ။ အဘ က အကောင်းဖက်ကနေ ရအောင် မြင်တတ်ပါတယ်လို့ ။
မြင်တတ်ဖို့ ၊ စိတ်ထားတတ်ဖို့ ပဲ လိုတာပါ ။ ဟီ ဟိ ။
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း က ၊ ပျက်ဖို့ တော်တော် အသံထွက်နေတယ် ။
ပေးကထဲ က ပွဲစားသာသာ အီတာလျံထိုင်း ကုမ္မဏီကို သွားပေးတာကို ဘဖော ရဲ့.. ၈လုံးကြီးရဲ့ လက်ချက်လို့ ပြောကြပါသည်။
အခုတော့ သက်ဆင် နဲနဲ ခြေရှုပ်နေတော့ သူဝင်လုပ်မလား မသိ .. (ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ထင်တာ ပြောတာနော် )
ဟုတ်ကဲ့ Optimism သမားတယောက်ဟာ အနည်းဆုံးတော့စိတ်ချမ်းသာမှာပါဗျာ
ဒါနဲ့ မိတ်ဆွေက seaman တယောက်ဖြစ်ပုံဘဲဗျ
ဟုတ်ပါတယ် ။ ကျနော်က သင်္ဘောသားပါ ။
ရွာထဲမှာ ကျနော် သိသလောက် သင်္ဘောသား ၅ ယောက် ရှိသဗျ ။
ကို ဆင်ဖြူရှင် ပါ ထပ်တိုးလာရင် ၆ ယောက်ပေါ့ ။
ပညာရတဲ့ ပိုစ့်မို့ ကျေးကျေးပါ ခည.
သဂျီး မခိုင်ဇာ နဲ့ အဘဖော တို့ရဲ့ စာတေအတွက်လည်း ကျေးကျေးပါခီညာ.
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဘာမန်
မှန်လဲမှန် အကျိုးလဲ ရှိ လူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့ အရေး အပြောမျိုးနဲ့ ဒီလို စာမျိုးလေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ
သမ္မတကြီး ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုး သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ
ကိုယ်နာမည်ကြီးချင်ရင် နာမည်ကြီးပြီးသားလူတွေကို ခေါင်း တက်ခေါက် ရသတဲ့ ….
ကျုပ်လဲ နာမည်ကြီးဆရာကြီး ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ kai နဲ့ Foreign Resident တို့အဆိုကို ဆက်ဆွေးနွေးဦးမယ်…
၁- မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း
အဲဒါကတော့ တနိုင်ငံလုံးကလူတွေကို ၀ါဒဖြန့် ရိုက်သွင်းပြီးသားဆိုတော့ သွားထိလို့မဖြစ်
(အမှန်စင်စစ်က အဲဒီမြစ်ကြီးက စီမံကိန်းမရှိခင်ကတည်းက ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြပါ
မြစ်ကြောင်းတလျှောက် စီဘီတွဲ(ကုန်တွဲသင်္ဘော)တွေ မောင်းတဲ့ လိုက်တဲ့ သူတွေကိုလဲ မေးကြည့်ကြပါ..။
စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးပြီး အလွမ်းသယ်နေကြတာ ။ တကယ်က မြစ်ချောင်းတို့မည်သည် ပထ၀ီသဘောအရ
စ ကောင်း ပျက် ဆိုတဲ့ သင်္ခါရသဘောကို မလွန်ဆန်နိုင်။
အဲသည်မြစ်ကြီးကို ခေတ်အဆက်ဆက် ဒီအတိုင်းပစ်ထားတာ တရားခံဘယ်သူလဲ
အဲသည်မြစ်ကြီး ပျက်စီးရာဖြစ်တဲ့ သဲ ကျောက်စရစ် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ စံနစ်ဇယားမကျပဲ ထုတ်ယူနေတာကို
သိသိကြီးနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့တရားခံ ဘယ်သူလဲ
အဲသည်မြစ်ကြီးရဲ့ ရေဝေရေလဲဒေသတွေက ပတ်ဝန်းကျင်သစ်တောတွေ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ကိုယ်တိုင်လဲတရားဝင်ထုတ်ယူ
တရားမ၀င်ထုတ်ယူသူတွေကိုလဲ ဆက်ကြေးကောက် မျက်စိမှိတ်ထားတာ ဘယ်သူတွေလဲ…..)
လူညီမှတော့ ဤ ကို ကျွဲ ဖတ်ကြပါစို့ …..
အဲသည်မြစ်ဆုံမှအပ အခြား မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေ များများဆောက်သင့်တယ်
လျှပ်စစ် အခုရနေတာရဲ့ ငါးဆ မသုံးနိုင်မချင်း ကျုပ်တို့နိုင်ငံ တိုးတက်စရာမရှိ
ဒီခေတ်မှာ လျှပ်စစ်မရှိပဲ လူနဲ့တူဖို့ မစဉ်းစားနဲ့…
၂- ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းများနဲ့ ဆက်စပ် စီမံကိန်းများ
ကိုယ့်နိုင်ငံသားလူငယ်ထက်ဝက်လောက် သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်သမားသွားလုပ်နေရတာတောင် အသိတရားမရသေးကြဘူး…
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးသာမက ဒေသတွင်းအကျိုးစီးပွားအတွက်အရေးပါမှု့ ကိုပါ စဉ်းစားရမယ်
အဲသည်စီမံကိန်းတွေကို တကယ်အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း/လူ ရှာပြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ရမယ်
အဲဒါတွေကို တားတဲ့သူဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးကို တားမြစ်ရာရောက်တယ်။
၃- တရုတ် ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်း
အဲသည်ဟာကြီး ကိုယ့်မြေပေါ်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်လာတာဟာ တစ်နည်းတစ်လမ်းအားဖြင့် တရုတ်ဘီလူးကြီး(နဂါးကြီးလို့လဲခေါ်ချင်ခေါ်ပါ ) ကို ပြန်ထောက် ပြန်ထိမ်းနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းရလာတာဖြစ်တယ်
အရှည်ကြီးဖြန့်တွက်လိုက်ရင် ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲဖို့ အရေးအကြီးဆုံးသောနည်းလမ်းတောင် ဖြစ်နေဦးမှာ။
အဲဒါကြီးဖြတ်မှာကို အခုလဲ ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက်နေကြပြန်တယ်။
ဥပဒေကို တကယ်တရားတဲ့ တရားဥပဒေဖြစ်အောင် ချက်ချင်း အားသွန်ခွန်စိုက် ရေးဆွဲပြုပြင်ရမယ်
အဲသည်ဥပဒေတွေ ရလာတဲ့အခါ အရာရာကို ဥပဒေနဲ့အညီသာ
ဥပဒေစိုးမိုးမှ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အတွက် ကယ်တင်ရာရောက်မယ်
ဒါကြောင့် ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် နည်းလမ်းအားလုံးကိုသုံးပြီး
ဥပဒေ စိုးမိုးအောင် အရင်လုပ်ရမယ်။
ဒါတောင် ခရုလို နှေးနေတုန်းရှိသေးတယ်….
” တရုတ် ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်း
တစ်နည်းတစ်လမ်းအားဖြင့် တရုတ်ဘီလူးကြီး(နဂါးကြီးလို့လဲခေါ်ချင်ခေါ်ပါ ) ကို
ပြန်ထောက် ပြန်ထိမ်းနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း ရလာတာဖြစ်တယ် ”
ဦး ပါ ရဲ့ ၊ ကျနော်လည်း အဲဒီ အတိုင်းပဲ မြင်တယ် ။
အဲ ၊ သုံးတတ်ရင် ဆေး ၊ မသုံးတတ်ရင်တော့ ဘေး ပေါ့ ။
ပါးနပ် ကျွမ်းကျင်ဖို့တော့ လိုတယ် ။
တရုတ်ကြီး ကို ပညာပေးချင်ရင် ၊
အကြောင်း တစ်မျိုးမျိုးပြပြီး ၊ ရေနံ ပို့တာ ၊ ဂက်စ် ပို့တာ ၊ တစ်ရက်လောက် ဖြတ်လိုက်ယုံပဲ ။
ပြစရာ အကြောင်းတွေများ များလွန်းလို့ ၊ တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင်တောင် ပြလို့ရတယ် ။
တရုတ်ကြီး ဟိုဘက်ကနေ ငိုယို အော်ဟစ်နေမှာ မြင်ယောင်သေး ။ ဟီ ဟိ ။
အဲ အဲ ။ တစ် ရက် နှစ် ရက် ထက်တော့ မပိုနှင့်ပေါ့နော် ။
ဆွေမျိုး ပေါက်ဖေါ် အချင်းချင်း ချစ်လို့ ကြည်စားတာပဲဟာ ။ ဟီ ဟိ ။
တစ် ရက် နှစ် ရက် ထက် ပို သွားလို့ People’s Libration Army ကြီးဆင်းလာမှာလဲ ကြောက်ရသေး ။
အဲလို ပိုက်လိုင်း နှင့် ကလိယုံတင်မကဘူး ၊
တရုတ်ကြီးရဲ့ ရေနံ သယ်လာတဲ့ သင်္ဘောတွေကို Port State Control ဆိုပြီး ၊
ကျောက်ဖြူ ဆိပ်ကမ်းကနေ စီးပြီး Lesson ပေးလို့ရသေးတယ် ။
တရုတ် သင်္ဘောတွေ ၊ တစ်စီး မကျန် အကုန် ထိုင်ဖမ်းနေလို့ရတယ် ။
ရွာသူားထဲက တရုတ်ကြီး မုန်းသူများ ရှိရင် ၊ အခု ကတည်းက သင်္ဘော စလိုက်ထားကြ ၊
နောက် ၁၀ နှစ်လောက်ကြာလို့ Captain / Chief Engineer ဖြစ်လာရင် ၊
Port State Control Officer ဆိုပြီး တရုတ် သင်္ဘောတွေ အကုန် ထိုင်ဖမ်းနေလို့ရတယ် ။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ၆၈နှစ် မြောက် မွေးနေ့မှ
စစ်မှန်သော စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံပြီး တိုင်းသူပြည်သားများ ကို ရင်ဝယ်သား ကဲ့သို့ တိုးတက်ကြီးပွါးအောင် စောင့်ရှောက်သွားနိုင်ပါစေ။
သမ္မတကြီး ရဲ့ မှန်ကန်သော စိတ်ထားစေတနာကြောင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်ကြီးပွါးရေးကို တားဆီးနေသော အနှောက်အယှက် များအားလုံး ကင်းစင်သွားကြပါစေ။
တိုင်းသူပြည်သားများ ချစ် သော၊ အားကိုးသော သမ္မတကြီး အဖြစ် သမိုင်းမှတ်တိုင် တင်ကာ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပြီး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
မန်းဂဇက်ရွာသူ/သား များမှ ဆုမွန်ကောင်း ပို့သလိုက်ပါတယ်။
မေတ္တာရှိရာ မေတ္တာလာပါတယ် သမ္မတကြီးရှင့်။
“လူတိုင်းမိမိတာဝန်မိမိကျေပွန်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်စနစ်ဘဲကျင့်သုံးကျင့်သုံး၊ ဘယ်လိုအစိုးရဘယ်တက်တက် မြန်မာနိုင်ငံဟာ စည်းကမ်းမရှိတဲ့၊ ဘယ်သူ့တွေ့တွေ့မျက်နှာချိုသွေးနေရတဲ့ ဖာနိုင်ငံလိုမျိုးဖြစ်နေမှာဘဲ”
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စကားကို သဘောကျလွန်းလို့ အထပ်ထပ်အခါခါ စိတ်ထဲ မှာရွတ် နေပါတယ်။
အဖိုးတန်တဲ့ စာစုတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထိပ်တက်နေပြီး ကိုယ့်တာဝန် က ဘာလဲ ဆိုတာ မသိတဲ့ လူတွေ၊ နားမလည်တဲ့ လူတွေ ကတော့ နေရာ ယူ နေဖို့ မသင့်တော့ဘူး။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ မုန်းတီးမှုမပါပေမဲ့ ရုံခါဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ။
စင်္ကာပူ အစိုးရ တော်တဲ့ အကြောင်း ထဲမှာ.. ဒါလည်းပါတယ်.. ဖဘ က ရှာတွေ့တာ..
ကျွန်တော်ပြောချင်တာနဲ့တော်တော်တူတယ်( စင်ကာပူဆိုတာ မြို့သေးသေးလေးပါဗျာ။ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားလို မွတ်စလင်နိုင်ငံကြီး ၂ နိုင်ငံရဲ့ အလယ်နားမှာ နေရတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ပါ။ ‘မွတ်စလင်ပတ်လည် ၀န်းရံနေသောမြို့ကို စင်ကာပူဟုခေါ်သည်’ လို့တောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့များ …
……. ”Islamic Republic of Singapore” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံသစ်တစ်နိုင်ငံဟာ ဒီကမ္ဘာမြေမှာ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာ အတော်လေးတောင်ကြာနေလောက်ပါပြီ)
မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီး တစ်ယောက် (မြို့ မှာနေတဲ့ သူကို ပြောပါတယ် ၊ နယ်တို့ ရွာတို့ ကတော့ ဘယ်လိုနေလဲ မသိ) မွတ် ကို ယူတယ်ဆိုတာကလဲ
အချို့ သော အနဲငယ်သော မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသားတွေ ကြောင့်မို့ ပါ ။
အဲ့ကောင်တွေ ဘယ်လို လုပ်လဲ ဆိုတော့
ကိုယ်လဲ အတည်တကျ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမှာ မဟုတ်ပဲနဲ့ ၊ ရည်းစားအဖြစ်တွဲ ၊ ကာမကျူးလွန် ပြီး ဖြတ်ထားပစ်ခဲ့တော့ ၊ ကျန်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ခဗျာ ၊ နောက်ပိုင်း သူ့ ဘဝ ကို အတည်ယူနိုး ၊ ယူနိုး နဲ့မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသားတွေ ကို ထပ်တွဲပေမယ့်လဲ ၊ ခြံခုန်ဖူးတဲ့ကြက် လိုပဲ သဘောထားကြတော့ ။ နောက်ဆုံး ၊ မြန်မာတွေအကြောင်းလဲ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ၊ လူတကာ သောက်တဲ့ ရေအိုးစင်က ရေကို ဘယ်သူမှ တန်ဘိုးမထား ။ အတည်တကျ ယူမယ့် မြန်မာ က မရှိတော့ ။
အဲ့ချိန်မှာ မွတ် က ဝင်ပြီး တစ်ကယ်ချစ်တာလိုလိုနဲ့ ၊ ဇွတ်ဝင်လုံး ၊ လက်ထပ်ပြီး သူတို့ ဘာသာထဲ ဇွတ် ဆွဲ သွင်းပါလေရော ။
အဲဒါတွေကြောင့်မို့၊ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသား ချာတိတ်ပေါက်စ တွေ ငါးပါးသီလ အကြောင်း သေချာနားလည်အောင် ရှင်းပြရမှာ ဖြစ်သလို ၊ လိုက်နာဖို့ လဲ ဆုံးမရမှာ လူကြီးတွေ တာဝန်ပေါ့ဗျာ ။
နောက်ပြီး မနေနိုင်လွန်းရင်လဲ သူများသမီးပျို သွား ကျူးလွန်မယ့် အစား ၊ ပြည်တန်ဆာ ဆိုတာ လိုအပ်တာမို့ 
တရားဝင် ပြည်တန်ဆာ ဆိုတာလဲ ပေါ်ထွန်းလာဖို့လဲ လိုအပ်မယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ
မှတ်ချက် ။ ကျုပ် ရဲ့ အမြင်သာ ဖြစ်ပါတယ်
ကိုပေ ပြောတာတွေကို ၊ အဘ ထောက်ခံတယ် ။
၁ ။ ယောက်ျားတွေကလည်း သစ္စာ မရှိကြဘူး ။
မိန်းမ မမြင်ဘူးတဲ့ အငတ်အပြတ်တွေကျနေတာပဲ လိမ်ညာပြီး ဝါးဖို့ပဲ စောင့်နေကြတယ် ။
၂ ။ မိန်းမတွေကလည်း နှာခေါင်းမပါရင် တကယ်စားမှာ ။
အဲလို လိမ်ညာပြီး ပြောတဲ့သူတွေကိုမှ ကြွေချင်ကြတယ် ။
အဘ တစ်သက်မှာ တစ်ခါမှ လိမ်ညာပြီး မိန်းကလေးတွေကို မဝါးဘူးဘူး ။
ခပ် ရှင်းရှင်းပဲတွေးတယ် ၊ ဒီကိစ္စဟာ ငါ မုသာဝါဒ ပြောရလောက်အောင် တန်တဲ့ကိစ္စလား ။
၁ ။ လန်ပြန်နေအောင်ချောတဲ့ မိန်းကလေး တစ်သိန်း လောက်ပေးရင် ရမယ် ။
၂ ။ အပျိုစင် ဆိုတာကိုမှ ကြိုက်ရင် ၄/၅ သိန်း လောက် ပေးရင် ရမယ် ။
ဒီလောက် ပိုက်ဆံ အတွက် ငါ မုသာဝါဒ ပြောတော့မလား ။ ဒါဘဲ ။
အဘ ငယ်စဉ်က ၊ အမှန်အတိုင်း မယူနိုင်ပါဘူး လို့ ပြောလိုက်လို့ ၊
အခန်းပိတ် မီးမှိတ် အိပ်ရာထဲ ရောက်ပြီးမှ ပြန်ထွက်သွားတာတွေ ရှိတယ် ။
တတ်နိုင်ဘူးလေ ။ မုသာဝါဒ တော့ မ ပြောနိုင်ဘူး ။
ဒီတစ်ခါ အဘဖောနဲ့ ကိုပေပြောတာ လုံးဝထောက်ခံပါတယ်..။
လောကမှာ ကိုယ့်အိုးနဲ့ ကိုယ်ဆန်တော်တာပဲရပါတယ်။
မိန်းကလေးဖက်လည်း ကြွယ်တဲ့ဘဲဆိုပြီး အလိုလိုက်ရင်တော့ အမှိုက်ဖြစ်သွား
ပါလိမ့်မယ်။ ခုခေတ် လူငယ်တွေရဲ့ ဘီယာဝိုင်း လက်ဖက်ရည်ဝိုင်း အရက်ဝိုင်းတွေကို
မိဘတွေ နားစွင့်ကြည့်ပါ။ ချစ်သူမိန်းကလေးဆီက ဘာမှမရသေးရင်
ငပေါ အခြောက်ကြီး လုိ့ ၀ိုင်းနောက်နေကြတာ..။ ဒီတော့ကာ..
ကိုယ့်ကိုယ်မှ တန်ဖိုးမထားရင် ဘယ်သူမှ တန်ဖိုးလာမထားပါဘူး..
ပညာရှင်တော်တော်များများ ဘက်စုံထောင့်စုံက ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးသွားတဲ့ ပို့စ်မို့ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကိုရော … အခြားကွန်းမင့်ပေးသူတွေကိုပါ လေးစားပါကြောင်း …။
ကိုယ် ဘာမှ မပြောနိုင်လို့
တကယ် မျက်စိကြီး နားကြီးတွေ ဆွေးနွေးချက်တွေကိုပဲ လိုက်ဖတ်သွားပါတယ်။
ရေးတဲ့သူ၊ ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးသူတွေကိုလဲ လေးစားပါတယ်
ဘယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာ အတိုက်အခံက အစိုးရနဲ့ ပေါင်းရိုက်ပေါင်းစားတာ တွေ့ဖူးသလဲ ငါ့ကြောင်ရယ်… နေ့ခင်းကြောင်တောင် ငါးကြော်ဝင်မနှိုက်နဲ့… ဘွားဒေါ်လေသံလိုက်ပြီး ကပ်တီးမူးလဲတော့ ဝင်မလုပ်နဲ့ကွာ… နင့်အလံမြင်ဂထဲက လဗြွတ်ထင်သဟေ့…..
မြန်မာနိုင်ငံက တကယ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ တဲ့လား ကိုကြောင်ကြီး။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး characteristic ဖြစ်တဲ့ “Free and Fair Elections” မရှိသေး/မဖြစ်သေးသ၍ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ပြောရမှာ ရှက်ဖွယ်ပါဘဲ။
ကျုပ်လဲ နာမည်ကြီးဆရာကြီး ၁ ဦးဖြစ်တဲ့
မြန်မာပြည်ဟာ သီပေါမင်းလက်ထက်မှာ ပါတော်မူတယ်ဆိုပေမယ့် အဓိကတာဝန်ရှိတာ မင်းတုန်းမင်းပါ။
ဘာတွေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားသလည်း.. မသိပေမယ့်.. သမိုင်းစာတွေထဲ.. ထင်ရှားကျန်ရစ်နေတာလေး၂ခုနော..။
၂။ ရေမြုတ်ဗုံး၊ မင်းတုန်းမင်းနဲ့ ဆွမ်းမစားနိုင်ဟန်လုပ်ပြသွားတဲ့ဆရာတော်တပါး..
၁.. အရ.. မင်းတုန်းမင်းမဖြစ်သေးခင် ကျောင်းသားဘ၀ ဘာမဟုတ်တဲ့ငခြောက်ပြားအမှုနဲ့.. ဆရာတော်ကကြိမ်နဲ့..ရိုက်တာခံရတယ်..။
အဲဒီစိတ်အနာကနေ.. ဘယ်လောက်ကြောက်တတ်သွားသလဲဆိုတော့.. ၂ အရ..ဘုန်းကြီးစိတ်ဆိုးတော်မူပြလိုက်တာနဲ့.. လန့်ပြီး.. .ညီတော် ရေမြုတ်ဗုံးစမ်းနေတာကို ရပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အထိပဲ..
(ကျန်တာချဲ့တွေးကြည့်ပါ..။ ကလေးဘ၀က..အမှုဟာ ကြီးသေတဲ့အထိ မှတ်မိစိတ်စွဲတတ်တာ. သိကြပါ)
ဒီအမှားမျိုးကို.. မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်း.. အစိုးရအဆက်ဆက်.. ထပ်ခါကျုးလွန်နေတာတွေ့ရပါတယ်..
ဒီကိစ္စကိုတော့ နည်းနည်း စောဒက တက်ချင်မိတယ်
မင်းတုန်းမင်းနဲ့ ငါးခြောက်ပြားကိုတော့ မပြောလိုပေမင့်
ဒုတိယအချက် ရေမြုပ်ဗုံးကို ကန့်ကွက်တယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် မြန်မာ့သံတော်ဆင့်ထဲမှာဖတ်မိထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုရှိပါတယ်။
အဲဒါကို ကိုးကားပြောရရင် ကနောင်မင်းသား လုပ်ကြံခံရပြီးတဲ့အထိ ရေမြုပ်ဗုံး စီမံကိန်းဟာ ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်နေဆဲပါ။
ဒီကိစ္စကို အင်္ဂလိပ် တွေ မြန်မာပြည်သိမ်းပြီးတော့ အစီရင်ခံတဲ့ မှတ်တမ်းမှာလဲ ပါတယ်(ထင်တာ)
လက်ရှိ ခေါင်းထဲမှာ မှတ်မိတာက အဲဒီ ဆောင်းပါးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်က ပါခဲ့တယ်ဆိုတာကလွဲလို့ မရှိတော့တာကြောင့်
ရှာဖွေ ကြည့်ပါတော့ရယ်လို့သာ………………. :hee:
ဗဟုသုတ အများကြီး ရစေတဲ့ ပို့စ်ပါ ခင်ဗျာ …
ဝင်ဆွေးနွေးဖို့တော့ မလုံလောက် သေးတဲ့အတွက်
ဘာမှ မပြောတာ့ပါဘူးရယ် ….